ပရိသတ်ကြီးနှင့် ကျန်းမာရေး – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in စိတ်ထဲရှိသမျှ and tagged funny. Bookmark the permalink.
လွဲလွဲလေးလည်း ကောင်းပါတယ် →
2 thoughts on “ပရိသတ်ကြီးနှင့် ကျန်းမာရေး”
MrDBA | August 6, 2009 at 11:58 pm
ဆာတေး ပန်းကန်လေး ဒီဖက်ပို့လိုက်ပါ
ကုမ်ရာသီသူ | August 7, 2009 at 1:23 am
ပို့ချင်ပါ့ ကိုကြီးဒီဘီ။ အဲဒီညနေက နှမြောမြောနဲ့ ကျွန်တော်ပဲ အစာအိမ်ထဲ ပို့လိုက်ရတယ်။ ဂယ်ပဲဗျာ။ စိတ်ကို မကောင်းဘူး။ (ကိုယ်ပဲ စားလိုက်ရမယ်မှန်းသိရင် ဒီ့အရင် chicken rice တစ်ပွဲ စားမထားပါဘူး) 😦